Avast!7Free Antivirus Final ~ မျိုးကို
Avast!7Free Antivirus Final
02:12 Free Antivirus No comments
မကြာသေးခင် က Avast က နောက်ဆုံး Version ဖြစ်တဲ့ Avast7ကို ထုတ်လိုက်ပါပီ။ company’s flagship product ဖြစ်တဲ့ ‘avast! Free Antivirus7ဟာ ပိုမို ကောင်းမွန် မြန်ဆန် ပီး User တွေ အတွက် ပိုမို လွယ်ကူလာစေပါတယ်။ Avast ရဲ့ new version ဟာ security products မှာ သူရဲ့ Package ကိုလည်း များစွာသော new technologies တွေကို ပေါင်းလိုက်ပါတယ်တဲ့ဗျာ။
Avast7ဟာ new and emerging threats တွေမှ User တွေကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက် real-time virus database updates ကို ထုတ်လွတ်ဖို့ cloud မှ Streaming updates ကိုလည်း မိတ်ဆက်လိုက်ပါပီ။
New File reputation system ‘FileRep‘ ကျတော့ known safe files တွေမှ potentially dangerous files တွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ပိုမို မြန်ဆန် တဲ့ threat identification တွေကိုလည်း ရရှိစေနိုင်ပါတယ် တဲ့။ နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားစရာက တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဘယ်လိုသော Geek Friend ဒါမဟုတ် technical person က remote support ကို စတင်ဖို့ လုံခြုံ စိတ်ချရမှု တွေကို Offer လုပ်လာတဲ့ Remote Assistance ပါပဲ။ ဒီနည်းလမ်းဟာ ကို ဆန္ဒ ရှိသူ တစ်ယောက်ယောက်ကို remote place တစ်ခု ကနေ ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ် ခွင့်ပေးပီး ပြသာနာ တစ်ခုကို ဖြေရှင်းနိူင်မှာပါ။
နောက်ထပ်ကတော့ Avast7က Installation အတွင်းမှာလည်း Customizable Installation ကိုလည်း Offer လုပ်လိုက်ပါတယ်တဲ့။ Option (၃) ခု ကို Display နိုင်မယ်။ Express install, Compatible install and Custom install ကိုကြိုက်တာကို ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။ Google Chrome တို့လိုမျိုး Cool Browser ကို Installation အတွင်းမှာ ပါ Promote လုပ်ခွင့်ပြုလာပါတယ်။ မလိုချင်ရင်တော့ Un check လုပ်ခဲ့လို့ ရမှာပါ။
သုံးနေတဲ့ သူတွေကလည်း Upgrade လုပ်နိုင်သလို မသုံးဖူး ရင်လည်း စမ်းသပ် သုံးနိုင်ပါတယ်ဗျာ...
Avast! version 7.0.1407 Release Notes:
To update to avast!7directly, simply use the built-in program updater. It worked flawlessly for us,areboot was required though.
1.avast! Free Antivirus
2avast! Pro Antivirus
3avast! Internet Security
4.အဆင်မပြေရင် သူ့ရဲ့ Home Page ကိုသွားလည်းရပါတယ်.
5.ဒါလေးက Version နိမ့်ပေမယ့် KEY လေးနဲ့ပါ.